မနေတတ်အောင် – Grab Love Story
နိုဗိုတယ်ဟိုတယ် ရန်ကုန် စားသောက်ခန်းထဲမှာ လူသိပ်မရှိဘူး ။ တိုးရစ်အုပ်စုတစုဘဲ စားပွဲဝိုင်းတ၀ိုင်းမှာ ရန်ကုန်ခရီးသွား လမ်းညွှန်စာအုပ်လေးတွေ ဖွင့်ဖတ်ပြီး စကားပြောနေကြသည် ။ ပူစီ သူ့လက်က ရွှေရောင် အိုမီဂါနာရီကို တချက်ကြည့်လိုက်သည် ။ ၁၀နာရီသုံးဆယ့်ငါးမိနစ် ။ ချိန်းထားတာက ၁၀နာရီခွဲတိတိ ။ ချိန်းတဲ့အချိန်ထက် ၅မိနစ် ကျော်နေပြီ ။ ပူစီသည် အချိန်ကို လေးစားသည် ။ အချိန်တိကျအောင် အမြဲ ဂရုစိုက်သူ ။ ကိုယ်တိုင်လည်း နောက်မ ကျတတ်သလို တခြားလူ နောက်ကျရင်လည်း မကြိုက်ဘူး ။ စောစောက စားပွဲထိုးလေး လာချပေးသွားတဲ့ ကပါချီနိုခွက်ကို သူမထိရသေး ။ စိတ်စောနေသည် ။ သူလာစောင့်နေတာက အလုပ်အတွက် ။ အလုပ်ကို သူအမြဲ တိတိကျကျလုပ်သည် ။ ၀ိရိယရှိလို့ သူ ဒီအခြေအနေကို ရောက်လာတာ ။ ကြိုးစားသူတို့ရဲ့ ရလဒ်ကို သူ ခံစားခဲ့ရသည် ။ ကံ ဥာဏ် ၀ိရိယ ဆိုသလို ဥာဏ်ကောင်း ၀ိရိယ ရှိတိုင်းတော့လည်း ကြီးပွားချမ်းသာမလား ။ ကံကောင်းဖို့လည်း လိုအပ်သေးသည် လို့ သူထင်သည် ။ ဟော ။ လူတယောက် လာနေသည် ။ စားသောက်ခန်းထဲကို ၀င်လာသည် ။ မီးခိုးရောင်ရင့်ရင့် အနောက်တိုင်း ၀တ်စုံကို သေသေသပ်သပ် ကျကျနန ၀တ်ထားတဲ့ လူရွယ်တယောက် ။ ပူစီ့ဆီကို တန်းတန်းမတ်မတ် လျှောက်လာနေသည် ။ ပြုံးပြပြီး ညာဖက်လက် ကမ်းရင်း “ ဦးသက်ခိုင်မင်း ..ပါလား..ကျွန်တော် ရာဇ ပါ…” လို့ပြောလိုက်လို့ သူ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ပြီး လက်ဆွဲနုတ်ဆက်လိုက်ရင်း..“ ဟုတ်ပါတယ်…သက်ခိုင်မင်းပါ..ကို…ရာဇ…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ “ ကျွန်တော် နဲနဲ နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ ဦးသက်ခိုင်မင်း…ကား ရပ်စရာနေရာ ရှာနေရလို့ပါ” လို့ ကိုရာဇက ပြောလိုက်လို့ “ ရပါတယ်…ကိစ္စမရှိပါဘူး..” လို့ သူပြန်ပြောသည် ။ ကိုရာဇ ထိုင်ပြီးတဲ့နောက် သူ “ တခုခု စားပါ..သောက်ပါလား…ကိုရာဇ…” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ “ မစားတော့ပါဘူး ဦးသက်ခိုင်မင်း..ဘရိတ်ဖတ်စ် စားခဲ့ပြီးပါပြီ …အလုပ်ကိစ္စဘဲ ဆွေးနွေးကြရအောင်ပါ.” “ ကောင်းပြီ ကိုရာဇ…ကျနောတို့ အရင်က ဖုန်းနဲ့ စကားပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ ..ကိုရာဇဖက်က အိုကေမယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ဖက်ကလည်း အိုကေပါတယ် ..အလုပ်ဖြစ်ပြီဘဲ…” “ ကျွန်တော်တို့ဖက်က အိုကေပါတယ်…နေ့ သတ်မှတ်ပြီး လုပ်လိုက်ကြရုံဘဲ …ကျသင့်ငွေကတော့ အရင် ပြောထားတဲ့အတိုင်း ဒေါ်လာနဲ့ဘဲ လိုချင်တယ်ဗျ …ဘယ်တော့ ငွေချေမလဲ ဆိုတာ သိပါရစေ” “ ငွေချေတာကတော့ ရော့ပတ္တမြား ရော့နဂါး ဆိုသလို အွန်သာစပေါ့(တ် ) ..အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်တဲ့အချိန် ပစ္စည်းရတဲ့အချိန် ငွေချေမယ် ..” “ ကျွန်တော်တို့ အကြောင်းလည်း သိမှာပါ..ကျွန်တော်တို့က လိမ်စားမယ့်လူတွေ မဟုတ်ပါဘူး…ငွေကိုတတ်နိုင်ရင်တော့ အရင် လိုချင်တယ်ဗျာ..” “ အင်း..ရပါတယ်…ကိုရာဇတို့ဖက်က လိုချင်ရင်လည်း ပေးမယ် ..အိုကေပါ …ဒါဆို ၃၀ရက်နေ့ ပစ္စည်းတွေ ရမှာပေါ့နော်….” “ ဟုတ်ပါတယ် …. . ၃၀ရက်နေ့ …ကျွန်တော်တို့ကို ယုံကြည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ဦးသက်ခိုင်မင်း…” “ ယုံကြည်ပါတယ်…ကိုရာဇ…ကိုရာဇတို့နဲ့ အခုလို အလုပ်လုပ်ရတာကိုဘဲ ကျနော်က ၀မ်းသာနေတာပါ.. ..ကျနော့်လူတွေကို လွှတ်ပြီး ငွေပို့ခိုင်းလိုက်ပါမယ်..ကိုရာဇ …” ကိုရာဇက ပြုံးပြီး ခေါင်းညှိမ့်သည် ။
ပြီးတော့ သူ့ကုတ်အတွင်းအိတ်ထဲက မင်မိုရီစတစ်လေး တချောင်းကို ထုတ်ယူလိုက်ပြီး ကမ်းပေးသည် ။ “ ဒါက ကျွန်တော်တို့ ရောင်းမယ့် ဦးသက်ခိုင်မင်းတို့ လိုချင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်နဲ့ ပုံတွေပါ …ထပ်မှာချင်တာ ရှိရင် ဒါမှမဟုတ် ပြောင်းလဲချင်တာ ရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ…ဦးသက်ခိုင်မင်း…” “ ကောင်းပါပြီ ကိုရာဇ..” “ ကဲ ဦးသက်ခိုင်မင်း..ကျွန်တော့်ကို ခွင့်ပြုပါအုံး …” “ ကောင်းပါပြီ ကိုရာဇ….” ကိုရာဇ ထပြန်သည် ။ ဇွဲကပင် ထရေးဒင်း လို့ ခပ်သေးသေး ရေးထားတဲ့ ကြေးဝါဆိုင်းဘုတ်လေး နဲ့ တိုက်ခန်းထဲကို ပူစီဝင်လိုက်တဲ့အခါ စားပွဲကိုယ်စီက ၀န်ထမ်း အမျိုးသမီး နှစ်ယောက် က သူဝင်လာတာကို မြင်ကြတာနဲ့ပြာပြာသလဲ ထရပ်ကြသည် ။ သူတို့ရဲ့ အနောက်ဖက်က ဦးသက်ခိုင်မင်း မန်းနေးဂျင်းဒါရိုက်တာ လို့ ဆိုင်းဘုတ်လေး ရှိနေတဲ့ ရုံးခန်းထဲကို သူဝင်လိုက်သည် ။ တချိန်က မထင်မရှား ရွာငယ်လေးတရွာက ဆင်းရဲသား ကောင်လေး ပူစီ ဘ၀ကနေ အခုလို ကုမ္ပဏီတခုကို ပိုင်ဆိုင် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဦးသက်ခိုင်မင်း ဘ၀ကို ရောက်လာအောင် အဆင့်ဆင့် ဖြတ်သန်းကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ သူ့ဘ၀ကို သူပြန်မတွေးချင်တော့ပေမယ့် အခါအားလျော်စွာ တွေးမိတတ်သည် ။ သူ့ကို ဒီလို ဘ၀ကို ရောက်လာအောင် ပံ့ပိုးပေးတဲ့လူတွေထဲမှာ မေထားခင် က ထိပ်ဆုံးက ဖြစ်သည် ။ သက်ခိုင်မင်း ဆိုတဲ့ နံမည်က မေထားခင်ဘဲ ပေးခဲ့တာ ။ အမေတို့ ပေးခဲ့တဲ့ ပူစီ ဆိုတဲ့ နံမည်နဲ့က ထိပ်တန်း နေရာကို ရောက်အောင် ကြိုးစားတဲ့ အခါ မသင့်တော်ဘူးလို့ မေထားခင်က ပြောခဲ့ပြီး သူကိုယ်တိုင် နာမည် စဉ်းစား ရွေးပေးခဲ့သည် ။ နံမည်ပြောင်းဖို့ ကူညီခဲ့သည် ။ သူ့အပေါ် ကောင်းလွန်းတဲ့ မေထားခင်ကို သူ အရမ်း ချစ်ခဲ့သည် ။ မေထားခင်ကလည်း သူ့ကို ချစ်သည် ။ သူတို့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့် သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ကြားမှ အဖျက်က ရှိသည် ။ သည် အဖျက်က ဦးဗညားအောင်ခင် ။ဦးဗညားအောင်ခင်က မေထားခင်ရဲ့ အဖေ ။ ပူစီရဲ့ ဘော့စ် ။ မေထားခင်က ပူစီ့ကို တိုးတက်လာဖို့ လမ်းပြ ကူညီတယ် ဆိုတာက သူ့အဖေကြီး ဦးဗညားအောင်ခင် မရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကွယ်ရာမှာ ကူညီတာ ဖြစ်သည် ။ ဦးဗညားအောင်ခင်သည် တကယ်တော့ လူကောင်းတယောက် မဟုတ် ။ သမာအာဇီဝ ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားသောက်တဲ့ လူ မဟုတ်လို့ ဆိုလိုသည် ။ မကောင်းတာ မှန်သမျှကို ဦးဗညားအောင်ခင် လုပ်သည် ။ သေးတာ ကြီးတာ သူ ဂရုမစိုက် ။ အလုပ် မရွေးဘူး ။တချို့သော လူကြီးလူကောင်း အရေခြုံ လူဆိုးကြီးတွေက သေးနုတ်တဲ့ ဒုစရိုက် လုပ်ငန်းလေးတွေကို မလုပ်ကြ ။ အချီကြီးဘဲ လုပ်ကြသည် ။
ဦးဗညားအောင်ခင်ကတော့ ဒီလို မဟုတ် ။ အသေးအဖွဲလည်း သူလုပ်သည် ။ တပည့်တွေနဲ့ လုပ်ခိုင်းတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်သည် ။ သူသည် အိမ်မှာ မရှိတတ်ဘဲ တချိန်လုံး လိုလို ခရီးသွားနေတတ်သည် ။ သမီး ဖြစ်တဲ့ မေထားခင်ကိုတော့ စီးပွားကိစ္စ ခရီးထွက်နေသည်လို့ ပြထားပေမယ့် တကယ်တော့ သူသည် မိန်းမ အများကြီးကို တပြိုင်နက် ယူထားသူ ဖြစ်လို့ နယ်မြို့တွေမှာ ရှိနေတဲ့ သူ့မိန်းမတွေဆီကို တလှည့်စီ သွားနေတာ ဖြစ်သည် ။ သူ့တပည့်တွေကိုဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာကို သူ ညွှန်ကြား ခိုင်းစေသည် ။ ပူစိသည် တောကနေပြီး ရန်ကုန်ကို ရောက်လာတော့ ဦးဗညားအောင်ခင်နဲ့ တည့်တည့်တိုးပြီး ဦးဗညားအောင်ခင်က ပူစီရဲ့ ဥပတိရုပ်ကို ကြိုက်သည် ။ သည်ချာတိတ်သည် မီးခဲပြာဖုံး ..ဖြစ်နေတဲ့ အရည်အချင်း ရှိတဲ့ ကလေးကွ…ဒီချာတိတ်ကို မြေတောင် မြှောက်ပေးလိုက်ချင်သည်လို့ ပြောပြီး သူ့အိမ်ကို ခေါ်လာခဲ့သည် ။ စစချင်းမှာ ပူစီသည် ဦးဗညားအောင်ခင်ကို ဒုစရိုက်ခေါင်းဆောင်ကြီးမှန်း မသိခဲ့ ။ ကျေးဇူးရှင်ကြီး အနေနဲ့ အရမ်း ဘဲ လေးစားခဲ့သည် ။ ဦးဗညားအောင်ခင်ကလည်း တော်တော်နဲ့ ပူစီ့ကို သူ့အတွင်းရေးတွေကို အသိမပေးခဲ့ ။ ပူစီသည် ဦးဗညားအောင်ခင်ရဲ့ အိမ်ကို ရောက်တော့ ဦးဗညားအောင်ခင်သည် မိန်းမ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးချိန် အိမ်ထောင် ထပ်မပြုဘဲ တဦးတည်းသော သမီးလေးနဲ့ နေနေသူကြီး လို့ဘဲ သိခဲ့သည် ။ သမီးလေး မေထားခင်သည် လူတိုင်းရဲ့ ဖူးဖူးမှုတ် အလိုလိုက်တာကို ခံရတာကိုလည်း တွေ့ရသည် ။ မေထားခင်သည် ဖြူဖွေး စိုပြေတဲ့ အသားအရည် နဲ့ အင်မတန် ချောတဲ့ မိန်းကလေး ဖြစ်ပေမယ့် အဆင့်အ တန်း မခွဲခြားဘဲ စိတ်သဘော ကောင်းသူ တယောက်ပါ ။ တိုက်နဲ့ခြံနဲ့ ကားနဲ့ အစေခံ တပည့်တပန်းတွေနဲ့ ချမ်းသာတဲ့ အဖေနဲ့ နေရတာကြောင့် မေထားခင်သည် သန့်ပြန့်အဖိုးတန်တဲ့ အ၀တ်အစားတွေနဲ့ မွေးကထဲက ကောင်းကောင်းနေခဲ့ရလို့ ပိုပြီး သန့်ပြန့်ချောလှနေသည်လို့ ပူစီ ထင်သည် ။ မေထားခင်သည် ပူစီ့ကို ရောက်ရောက်ချင်းထဲက ခင်ခင်မင်မင် ဆက်ဆံခဲ့သည် ။ မေထားခင်က အေ၇းပေး ဆက်ဆံခဲ့တာကြောင့်လည်း သည်အိမ်ကြီးက အစေအပါး တွေကလည်း ပူစီကို ကောင်းကောင်း ဆက်ဆံကြသည်လို့ ပူစီ ထင်သည် ။ မေထားခင်သည် သူ မတတ်တာတွေ မသိတာတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သင်ပြပေးခဲ့သည် ။ ပူစီသည် တခါသင်ပြလိုက်ရင် တခါထဲ စွဲမြဲနေအောင် မှတ်မိတာကြောင့် မေထားခင်က သဘောကျသည် ။ ပူစီ ကို သင်ကြားပြသပေးတာကိုလည်း ဦးဗညားအောင်ခင်က သဘောကျသည် ။ သူ အသက်ကြီးလာတဲ့ အချိန်မှာ အားကိုး၇တဲ့ တပည့်ကောင်းတွေ ရှိချင်သည် ။ လူရင်းလူယုံ မွေးတဲ့သဘော ။ သူ့သမီး သင်ပေးတာတွေကို နားထောင်ဖို့ လိုက်နာဖို့ ပူစီကို ပြောသည် ။ သူက ခရီးထွက်ထွက်နေတာကြောင့် ပူစီသည် ဦးဗညားအောင်ခင်နဲ့နေရခဲသည် ။
သူ့ကိုယ်စား အိမ်မှာရော ကုမ္ပဏီမှာရော တာဝန်ယူပေးတဲ့ ဦးဝန်း ဆိုတဲ့ မန်နေဂျာကြီးနဲ့ နေရတာ လုပ်ရတာ ..များသည် ။ ဦးဝန်းရဲ့ သင်ပြပေးတာတွေကြောင့်လည်း ပူစီသည် ရန်ကုန်ရောက်ပြီး မကြာခင်မှာ လူရည်လည်လာသည် ။ လမ်းတွေ သိလာသည် ။ ကားမောင်းတတ်လာသည် ။ သို့ပေမယ့် မေထားခင်ဆီမှာ စာသင်ရလို့ ပူစီသည် အင်္ဂလိပ်စာရော ကွန်ပြူတာရော တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုပို ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်လာသည် ။ ဦးဝန်းက ကုမ္ပဏီ အလုပ်တွေကိုလည်း ခိုင်းသည် ။ သင်ပေးသည် ။ ကားမောင်းတတ်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပူစီသည် မေထားခင်ကို ကားနဲ့ ကျောင်းလိုက်ပို့ရတဲ့ အလုပ်ကို ရံဖန်ရံခါလုပ်ရသည် ။ ကားဒရိုင်ဘာကြီး နေမကောင်းတဲ့အခါ တို့ ခွင့်ယူသွားတဲ့ အခါတို့မှာ ဖြစ်သည် ။ မေထားခင် အကြောင်းကို သူ သတိရတာက အမြဲတမ်းပါ ။ ဒါပေမယ့် မေထားခင် အကြောင်းကို စဉ်းစား တွေးတောမိတိုင်း သူ့ရင်ထဲမှာ နာကျင် ခံစားရသည် ။ မေထားခင်နဲ့ ဝေးကွာခဲ့ရလို့ ။ အတိတ်ကို ပြန် စဉ်းစားမိတာနဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ မကောင်းဘူး ။ တခါတခါ မေ့ထားလိုက်ချင်ပေမယ့် ခေါင်းထဲကို ၀င်ဝင်လာသည် ..။ မေ့ပစ်လို့ မရဘူး ။ သည်အချိန်မှာ အပြင်က စာရေးမလေး ဂျူလိုင်မိုးမိုး ၀င်လာသည် ။ ဂျူလိုင်မိုးမိုးသည် သူ့အလုပ်ကိစ္စတွေ အားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲပေးနေတဲ့ အသက်၂၅နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး ။ “ ဆရာ…ဦးကက်စိန်က ဆရာနဲ့ တွေ့ချင်လို့ ရောက်နေပါတယ်…”လို့ ဂျူလိုင်မိုးမိုးက ပြောသည် ။ “ အေး…အေး…လွှတ်လိုက်ပါ…” ဦးကက်စိန် ဆိုတာက သူ့ရဲ့ ရှေ့နေ ။ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြစ်ဖြစ် အမှုတစုံတရာ ဖြစ်လာတဲ့အခါ အမြဲတမ်း ဥပဒေအကြံဥာဏ်တွေ ပေးဖို့ သူ့လက်စွဲရှေ့နေအဖြစ် သူ ခန့်ထားတဲ့ တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေကြီး ..။ ဦးကက်စိန် ၀င်လာသည် ။ အသားညိူညိူ ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ ကံတုံးဆံတောက် ဆံပင်..ကော်လာကတုံးရှပ်အဖြူ တိုက်ပုံအနက် ယောပုဆိုးအညိုနဲ့ ဦးကက်စိန်က အဲကွန်း နဲ့ သူ့ရုံးခန်းထဲကိုရောက်တော့ သဘောကျသွားပြီး…“ အမလေး ..နိဗ္ဗာန် ရောက်သွားသလိုဘဲ..ဆရာသမား…” လို့ သွားပေါ်အောင် ရယ်လိုက်ရင်း ပြောသည် ။ “ ထိုင်ပါ ဦးကက်စိန်..ဘာသောက်မလဲ …ကော်ဖီလား..လဖက်ရည်လား…” လို့ သူမေးသည် ။ “ မသောက်တော့ပါဘူး..ဆရာရယ် …တရားရုံးမှာ သောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ ..ပြောစရာလေး ရှိလို့ လာခဲ့တာ..” လို့ ဦးကက်စိန်က ပြောသည် ။ ဦးကက်စိန်ကို သူ ကိုလတ် အမှုကို လိုက်ခိုင်းထားတာကြောင့် ကိုလတ်ကိစ္စ တခုခု ထူးလို့ဖြစ်မယ်လို့သူထင်လိုက်သည် ။ သူထင်တဲ့အတိုင်း ဦးကက်စိန်က “ ဦးမော်မော်လတ်ကို ဒီနေ့ ရုံးထုတ်တယ်..ဆရာသမား…သူ့အတွက် ကျွန်တော် အာမခံ လျှောက်တယ် ..မရဘူး..အပယ်ခံရတယ်….ဦးမော်မော်လတ် အ ရမ်း စိတ်ဓါတ်ကျသွားတယ်..ကျွန်တော်လည်း ကြိုးစားလုပ်တာဘဲ…လိုက်လည်း လိုက်တယ်…မရဘူး…လူကြီးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုမို့ တရားသူကြီးကလည်း မယူရဲဘူး..ဆရာသမား …” လို့ ပြောပြသည် ။ ကိုလတ်က သူ့ဘော်ဒါ ။ သူ့ပါတနာ..လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ပေါ့ ။
နံမည် အပြည့်အစုံက မော်မော်လတ် ။ သူ ရန်ကုန်ကို ရောက်ပြီး ဒုစရိုက်လောကရဲ့ ဘုရင်တဆူလို ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဦးဗညားအောင်ခင်ရဲ့ အိမ်မှာမော်မော်လတ်နဲ့ ဆုံခဲ့ပြီး ညီအကိုလို ခင်မင်ခဲ့ကြသည် ။ သူ ကြီးပွားလာတဲ့အခါ မော်မော်လတ်က သူ့လုပ်ငန်းတွေမှာ လာဝိုင်းကူသည် ။ လုပ်သည် ။ သူအကျိုးရှိသလို မော်မော်လတ်ကိုလည်း သူဝေမျှသည် ။ ပေးသည် ။ ကျွေးသည် ။ မော်မော်လတ်က ဦးဗညားအောင်ခင် လက်အောက်မှာ သူတို့ တပည့်အဖြစ် လုပ်ခဲ့ကြစဉ်ကတည်းက အိမ်ထောင်ကျပြီး သမီးလေးတယောက် ရှိသည် ။ မော်မော်လတ်သည် လူချောလူဖြောင့်တယောက် ဖြစ်သလို သူ့မိန်းမ ဂျက်ဆီကာ ကလည်း ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်လိုဘဲ ရုပ်ရော ကိုယ်လုံးကော လှတဲ့မိန်းမလှလေးတယောက် ဖြစ်သည် ။ သမီးလေး ညိုမီလတ်က အခုဆို ၁၉နှစ် ရှိနေပြီ ။ ပူစီသည် ငွေအရှာကောင်းပြီး သုံးနိုင်ဖြုံးနိုင်လို့ မိန်းမ ဆိုတာ သူ့အတွက် မရှားခဲ့ပေမယ့် အသဲနစ်အောင် ချစ်ခဲ့ရတဲ့ မေထားခင်နဲ့ ဝေးကွာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် အခုထိ သူမိန်းမ အတည် မယူဖြစ်ခဲ့ ။ သူဌေးလူပျိုကြီးတယောက်ဆိုတော့ ရေလာဖို့ မြောင်းပေးကြတဲ့မိန်းမတွေကတော့ တပုံတခေါင်းပေါ့ ။ ပူစီက သူ့ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒတွေကို ကြေးစားမိန်းမတွေနဲ့ ဖြေရှင်းပစ်ပြီး ငွေရှာတဲ့ အလုပ်တွေကိုဘဲ ဖိဖိစီးစီး လုပ်ခဲ့သည် ။ ငွေရရင် ပြီးရော ငွေမျက်နှာကိုဘဲ ကြည့်သလို ငွေရှာ တဲ့နေရာမှာ ဥပဒေအထဲကရော ဥပဒေအပြင်ကရော သိမ်းကြုံး ရှာဖွေခဲ့လို့ အခုလို ကြီးပွားချမ်းသာလာခဲ့တာ ဖြစ်သည် ။မော်မော်လတ် ခုလို အဖမ်းခံရပြီး အချုပ်ကျနေတာ သူ့ပယောဂ မကင်းဘူး ။ မော်မော်လတ်က သူ့လို ..သူ့လောက် လောဘမကြီးဘူး ။ သူက အစာကိုဘဲ မြင်ပြီး ငါးမျှားချိတ်ကို မမြင်တဲ့ကောင် ။ မော်မော်လတ်က အရိုးစူးမယ် ပူစီ…မလုပ်နဲ့..လို့ တားတဲ့ကြားက သူ လုပ်ခဲ့သည် ။ လုပ်ခိုင်းခဲ့သည် ။ အစစ ဦးဆောင် လုပ်တဲ့လူက မော်မော်လတ် ။ သူက နောက်ကွယ်က ပံ့ပိုးသူ သက်သက် ။ တကယ်တမ်း ရဲတွေ မိသွားတာက မော်မော်လတ် ။ သူ့ လာလူး ဆိုတဲ့ တပည့်တယောက်လည်း မော်မော်လတ်နဲ့ အတူ အဖမ်းခံရသည် ။ ငွေ သိန်းတော်တော်များများလည်း အသိမ်းခံရသည် ။ မော်မော်လတ် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် သူ့ရှေ့နေကြီး ဦးကက်စိန်ကို လိုက်ခိုင်းသည် ။ တရားခွင်မှာမော်မော်လတ်ရဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေအဖြစ် လိုက်ခိုင်းတာတင် မကဘဲ တရားသူကြီး..စွဲချ တရားရေးအရာရှိ..ရဲတပ်ဖွဲ့ အစရှိတာတွေကို လိုက်ခိုင်းသည် ။ ကုန်ချင်သလောက် ကုန်ပါစေ..လွတ်ရင်ပြီးရောလို့သူ ပြောသည် ။ ငွေတွေလည်း ထုတ်ပေးသည် ။ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ ရှေ့ကို မထွက်ဘူး ။ ဦးကက်စိန်က တဆင့် မော်မော်လတ်ကို သူကိုယ်တိုင် မလာတာကိုတော့ စိတ်မရှိနဲ့လို့ သေသေချာချာ ပြောခိုင်းထားခဲ့သည် ။ မော်မော်လတ်ရဲ့ မိန်းမ ဂျက်စီကာက သူ့ဆီကို ငိုယိုပြီး အကူအညီလာတောင်းသည် ။ သမီးလေး ညိုမီလတ်ကလည်း ကျောင်းတက်နေဆဲ တန်းလန်းကြီး . .။ မော်မော်လတ် အဖမ်းခံရတဲ့ သတင်းကို ကြားကြားချင်း နေ့က ဂျက်စီကာနဲ့ ညိုမီလတ်တို့ သူ့ဆီကို ငိုကြီး ချက်မနဲ့ ပြေးလာကြသည် ။
အားကိုးတကြီး အကူအညီ တောင်းကြသည် ။ သူက အပေါင်းအသင်းကောင်းသူ..အဆက်ရှိသူလို့ သူတို့ သိထားကြသည် ။ ဂျက်စီကာနဲ့ ညိုမီတို့ သူ့ကို ဖက်ပြီး ငိုကြသည် ။ သူက ပြန်ဖက်ပြီး နှစ်သိမ့်သည် ။ ဘာမှ စိတ်မပူဖို့ ပြောသည် ။ မော်မော်လတ်က အရင်ထဲက သူ့အိမ်ကို မကြာခဏ ခေါ်လာတတ်လို့ သူကလည်းမော်မော်လတ် အိမ်ကို သွားလည်တတ်လို့ ဂျက်စီကာ နဲ့ ညိုမီနဲ့က ရင်းနှီး ချစ်ခင်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် အခု မော်မော်လတ် အချုပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့အချိန် သူတို့ အကူအညီ လိုအပ်နေတဲ့အချိန် သူ့ဆီကိုရောက်လာကြတဲ့အခါ ဖက်ပြီး နှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အခါ သူ့စိတ်တွေက အရင်တုံးကနဲ့ မတူတော့ဘဲ တက်ကြွ ဖေါက်ပြန်နေတာ သူ့ဖါသာ သတိထားမိလိုက်သည် ။ ဂျက်စီကာ လှတာ တောင့်တာကို ဟိုး စောစောထဲက သူသိနေသည် ။ မကြာခဏ မော်မော်လတ် အလစ်မှာဂျက်စီကာ့ကို သူ ပြစ်မှားတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်မိခဲ့သည် ။ မော်မော်လတ်ရဲ့ အိမ်က သူ့အတွက် စားအိမ်သောက်အိမ် ဖြစ်ခဲ့တာမို့ တချို့ညတွေ မော်မော်လတ်နဲ့ အရက်ဝိုင်းကနေ အပြန် သောက်လို့ မ၀သေးဘဲ မော်မော်လတ်တို့အိမ်မှာ ဆက်သောက်တတ်သည် ။ ဂျက်စီကာသည် သူနဲ့ မော်မော်လတ်ကို အမြည်း တခုခု အမြဲလို လုပ်ပေးတတ်သည် ။ တချို့ရက်တွေမှာ ဂျက်စီကာသည် အိပ်ရာထဲ ရောက်နေပြီးမှ သူတို့ကို တံခါး လာဖွင့်ပေးသည် ။ ည၀တ် အင်္ကျီကို အတွင်းက ဘာမှ မခံဘဲ ၀တ်ထားတဲ့ ဂျက်စီကာရဲ့ ဖြိုးကော့တဲ့ ရင်သားကြီးတွေကို သူ မြင်တွေ့ဘူးလို့ဂျက်စီကာကို တပ်မက်တဲ့ တဏှာအကြည့်နဲ့ ကြည့်ပြီး သူ ထန်ခဲ့ဘူးသည် ။ တခါတလေ မော်မော်လတ်က အသောက်လွန်တော့ အိမ်လည်း ရောက်ရော ခေါင်း မထောင်နိုင်တော့ဘူး ။ ဂျက်စီကာက သူ့ကို အိပ်ခန်းထဲ တွဲပို့လိုက်ရသည် ။ ဂျက်စီကာက သူ့ကို လာ စကားပြောတဲ့အခါ ဂျက်စီကာရဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီပါးပါး အောက်က အခုအခံ မပါဘဲ ၀တ်ထားတဲ့ ကိုယ်လုံး အလှအပတွေကို တွေ့မိရတာက သွေးသားတွေကို ဆူဝေ စေခဲ့သည် ။ ဘော်ဒါ အရင်းအခြာရဲ့ မိန်းမမို့ စိတ်တွေကို မနည်း ချုပ်တီးပြီး မြန်မြန်ဘဲ နုတ်ဆက် ပြန်လိုက်ရသည် ။ အခုလည်း ကိုလတ်က အချုပ်ထဲ ရောက်နေလို့ သူတို့ ငိုယိုပြီး ရောက်လာကြတော့ သည် သားအမိက ဟော့တ်လွန်းလို့ သူ့စိတ်တွေ မတည်ငြိမ်နိုင်ဘူး ။ ဂျက်စီကာ့ကို ဖက်ပြီး “ ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့..ငါရှိတယ်…နင်တို့ သားအမိကို အစစ ငါ တာန်ယူမယ်..” လို့ ပြောတဲ့အချိန် ဂျက်စီကာရဲ့ ကော့ချွန်တင်းတဲ့ နို့ကြီးတွေက သူ့ရင်ဘတ်နဲ့ တသားထဲကျအောင် ကပ်နေကြတော့ သူ့စိတ်တွေ မရိုးသားတော့ဘူး ။ ညိုမီလတ်ကလည်း..“ အန်ကယ်ရယ်..ဒက်ဒီ့ကို ကယ်ထုတ်ပါ အုံး..” လို့ ငိုပြီးပြောရင်း သူ့ကို နောက်ကျောကနေ လာဖက်ပြန်တယ် ။ ညိုမီလတ်က အမေတူ သမီး ။ နို့တွေ ဖင်တွေက ကြီးသည် ။ သူ့အမေလို နို့ထွားထွား တင်းတင်းတွေက သူ့ကျောကို ဖိကပ်လာကြပြန်တယ် ။ ရှေ့ရော နောက်ရော ဖိကပ်လိုက်ကြတော့ သူ့ပေါင်ကြားက ငပဲက ဒိုင်းကနဲ မတ်ထောင်သွားပြီ ။ သူတို့ဆီက ရေမွှေးအနံ့တွေကလည်း လူကို ကလူကြည်ဆယ် နေကြသည် ။ “ စိတ်ချ သမီး..အန်ကယ် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေတယ်….” လို့ ညိုမီလတ်လေးကို ကျောပွတ်ပြီး ပြောလိုက်တဲ့အချိန် သူ့ငပဲက တအား ထောင်လာသည် ။
ဂျက်စီကာ့ ဖင်တုန်းတွေကို တွေ့နေရတာကလည်း တကယ့်ကို စိတ်ထ စရာကြီး ။ “ ကိုလတ်က တိုက်ဆောက်နေတဲ့နေရာမှာ ရှိသမျှ ပုံအောထားလို့ ဂျက်စီတို့ လက်ထဲမှာ ငွေသိပ် မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ် ..ကိုစီ…” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ဂျက်စီကာကို “ ဘာမှ မပူနဲ့ ဂျက်စီ….ကိုယ် တယောက်လုံး ရှိနေတာဘဲ..အစစ ကိုယ့်တာဝန်ထား..အေးအေးဆေးဆေး တွေ့ကြပြီး စကားပြောကြတာပေါ့..” လို့ နှစ်သိမ့်စကား ပြောလိုက်ရသည် ။ ဂျက်စီကာကို ညစ်ညမ်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ ပြစ်မှားချင်တိုင်း ကိုလတ်ရဲ့ သူ့အပေါ် ကောင်းခဲ့တာတွေကို မြင်ယောင် သတိရပြီး စိတ်ရိုင်းတွေကို ထိန်းချုပ်ခဲ့သည် ။ ဂျက်စီကာနဲ့ ညိုမီလတ်တို့ သူ့ရုံးခန်းက ပြန်အသွား ရှေ့နေကြီး ဦးကက်စိန်ကို သူ ဖုန်းခေါ်လိုက်သည် ။ ဦး ကက်စိန်သည် စောစောကဘဲ ပူစီ့ရုံးခန်းကို လာသွားပြီး ကိုလတ် တရားရုံးမှာ အာမခံ မရတဲ့ကိစ္စ လာပြောပြခဲ့သည် ။ ကိုလတ်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပြန်ထုတ်ရမလဲ တိုင်ပင်ချင်လို့ ခေါ်လိုက်တာ ဖြစ်သည် ။ ဦးကက်စိန်က သူ့မှာ နည်းလမ်းတခု ရှိသည် လို့ ပြောသည် ။ ပူစီလည်း အားတက်သွားသည် ။ “ ငွေ ဘယ် လောက်သုံးရမလဲ ဦးကက်စိန်…” လို့ သူ မေးလိုက်သည် ။ ဦးကက်စိန်က “ ငွေပေးပြီး ထုတ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး… ဦးမော်မော်လတ်ရဲ့ စွပ်စွဲခံထားရတာတွေ အကုန်လုံးကို သူ့တပည့် လာလူးကို ပုံချလိုက်ဖို့ဘဲဗျ…ခင်ဗျား လုပ်ရ မှာက လာလူးရဲ့ မိန်းမကို ကျေနပ်လောက်တဲ့ ငွေပေးပြီး လာလူးကိုလည်း အချုပ်မှာ သွားတွေ့ပြီး ဦးမော်မော် လတ် ကိုယ်စား ထောင်ကျခံလိုက်ဖို့ ပြောဖို့ဘဲ ” လို့ ပြောပြသည် ။ သူ ခဏ စဉ်းစားလိုက်ပြီး…“ အိုကေလေ…ဦးကက်စိန်..ကျနော် သဘောတူပါတယ်…ကိုလတ် လွတ်လာရင် ပြီးရော လာလူးကို ကျေနပ်လောက်တဲ့ ငွေ ပေးလိုက်မယ်…” လို့ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။ “ ဒါဆို ကျနော် ဦးမော်မော်လတ်ကိုလည်း သွားတွေ့ပြီး ရှင်းပြလိုက်မယ်နော်…” “ အိုကေ ဦးကက်စိန်..လာလူးကိုတော့ ကျနော့်လူတယောက် လွှတ်ပြီး ပြောခိုင်းလိုက်မယ်..ကျနော် ကိုယ်တိုင် တော့ သူ့ကို သွား မတွေ့ချင်ဘူးဗျာ…” “ ဒါကတော့ ခင်ဗျား သဘောဘဲလေ …ထူးခြားရင် ကျနော် ဖုန်းဆက်ပါမယ်…” “ ကောင်းပါပြီ..ဦးကက်စိန်…” မော်မော်လတ် အစား လာလူး ထောင်အကျခံသွား လိုက်လို့ မော်မော်လတ် ပြန်ထွက်လာမယ် ဆိုလို့ စိတ်နည်း နည်းအေးသွားသည် ။ လာလူးကို ငွေ ဘယ်လောက်ပေးမလဲ ဆိုတာဘဲ သူ စဉ်းစားရမည် ။ “ ဆရာ….ပြည်လုံးချမ်းသာ ထရေးဒင်းက ဦးသန်းမောင်ရင်က ဆရာနဲ့ တွေ့ချင်လို့ အပြင်မှာ ရောက်နေပါတယ်…” လို့ ဂျူလိုင်မိုးမိုး လာပြောလို့ ပူစီ မော့ကြည့်လိုက်သည် ။ “ အော်..အေး..လွှတ်လိုက်…လွှတ်လိုက်…” ဂျူလိုင်မိုးမိုး သူ့ရုံးခန်းက ပြန်အထွက် ဂျူလိုင်မိုးမိုးရဲ့ နောက်ပိုင်းကို သူ တချက် ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ စွင့်ကား အချိုးကျတဲ့ တင်ပါးလှလှအိအိတွေကို သတိထားမိသည် ။ အင်း..ငါ ဘယ်လို ဖြစ်နေသလဲ..ငါ တဏှာစိတ်တွေ အရမ်း များနေသလား….။ မလုပ်သင့်တဲ့ မိန်းမတွေကို ထန်နေမိတဲ့ သူ့အဖြစ်ကို သူ ပြန်သုံးသပ်နေမိသည် ။ ငယ်ငယ်က မှားခဲ့တာမျိုးတွေ တခါ ထပ် မမှားချင်တော့ ။ မမှားသင့်တော့ဘူး ။ ငယ်ငယ်က …။ လူပျို့လက် ၀က်မြီးလို့ ပြောကြတဲ့ အရွယ် ။ လူပျိုပေါက် အချိန် ။
အဲဒီတုံးက ပူစီ …။ ရွာမှာတုံးက ပူစီရဲ့ ဘ၀ ..။ ပြန်မတွေးချင်တော့တဲ့ အတိတ်က အကြောင်းတွေ ..။ ရွာမှာတုံးက ပူစီက လူတကာရဲ့ ခိုင်းဘတ် ။ အဖေ သေပြီးတဲ့ နောက် အမေ့ကို တဖက်တလမ်းက ကူညီတဲ့ အနေနဲ့ ရွာထဲက လူတွေ ခိုင်းစရာ ရှိရင် သွားပြီး လုပ်ကိုင်ပေးလို့ လူတွေက မုန့်ဖိုးပေးကြသည် ။ ရတဲ့ ငွေကို အမေ့ကို သူ ပေးသည် ။ အမေက သား မုန့်ဝယ်စားဖို့ ထားပါ လို့ သူ့ကို ပြန်ပေးသည် ။ လူပျိုပေါက် ဖြစ်လာတော့လည်း သူ တချက်မှ မပျင်းခဲ့ဘူး ။ ရွာထဲက ငွေရှိတဲ့ လယ်ပိုင်ရှင် ခြံပိုင်ရှင်တွေဆီမှာ အလုပ်သွားတောင်းပြီး လုပ်သည် ။ မျက်နှာချိုပြီး ဖင်ပေါ့တဲ့ ပူစီကို လူတွေကလည်း အလုပ်ပေးချင်ကြသည် ။ ထန်းတောပိုင်တဲ့ ဦးတောကြီးကလည်း ထန်းတက်ခိုင်းသည် ။ ထန်းရည်ဆိုင် ဖွင့်ထားတဲ့ ဦးတောကြီးအတွက် ထန်းတက်ပေးတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ ပူစီသည် ထန်းတက်သမားပူစီ လို့လည်း သူနေတဲ့ သာကောင်းရွာ တ၀ိုက်မှာ လူသိများသည် ။ ဦးတောကြီးတို့ ထန်းရည်ဆိုင် အတွက် ကြွက်ကြော် ရောင်းဖို့ညပိုင်းမှာလည်း ရွာ ပတ်ဝန်းကျင်က လယ်ကွင်းတွေထဲမှာ ကြွက်ထိုးပေးသည် ။ လယ်ကြွက်ကြီးတွေက လယ်ထဲက စပါးတွေ နင်းစားပြီး ဆူဖြိုး ၀ဖီးနေသည် ။ အရေဆုတ် ခုတ်ထစ်ပြီး ကြွက်ကိုင်ပေး ကြော်ပေးသည် ။ ထန်းရည်နဲ့ ကြွက်ကြော် လာစားတဲ့ ရွာထဲက ကာာလသားတွေက ပူစီကြော်တဲ့ ကြွက်ကြော်က ဦးတောကြီးတို့ လင်မယား ကြော်တာထက် ပိုကောင်းသည်လို့ ထင်ကြသည် ။ ဒါကြောင့် ဦးတောကြီးကလည်း ပူစီကို အမြဲ ခေါ် ခိုင်းတတ်သည် ။ ငါးရှဉ့်လည်း ထိုးသည် ။ ယုန်လည်း ထောင်သည် ။ ချိုးလည်း ထောင်သည် ။ ပူစီ ရန်ကုန်ကို ရောက်သွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းက ရွာမှာ အချမ်းသာဆုံးလူ လို့ ဆိုရမယ့် ဦးလူထုန်ရဲ့ သမီးထွေးလေး စီစီထုန် နဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကြောင့် ပူစီလည်း ရွာမှာ ဆက် နေလို့ မဖြစ်တော့လို့ ဝေးရာကို ပြေးခဲ့ရတာ ။ တခြား မြေပိုင်ရှင် လယ်ပိုင်ရှင်တွေလိုဘဲ ဦးလူထုန်တို့ လင်မယားကလည်း ပူစီကို သူတို့ အိမ်က အလုပ်တွေကို ခေါ်ခိုင်းသည် ။ ပူစီက အသားလတ်လတ် ရုပ်ရည်ကလည်း သန့်လို့ ရွာက တခြား ကောင်လေးတွေ ထက် စာရင် သန့်ပြန့် သလို အလုပ် အမြဲ လုပ်နေလို့ သူ့ကိုယ်ခန္ဓာကလည်း ကျစ်လစ် တောင့်တင်းပြီး ကြည့်ကောင်းသည် ။ ဦးလူထုန်တို့မှာက သမီးနှစ်ယောက် ရှိသည် ။ အကြီးမက ရီရီထုန်…။ အငယ်မလေးက စီစီထုန် ။ အကြီးမရီရီထုန်က ပူစီနဲ့ အရွယ်တူသည် ။ တမိုင်ကျော် ဝေးတဲ့ အနီးဆုံး မြို့လေးက အထက ကျောင်းမှာ ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ အချိန် ရီရီထုန်နဲ့ ပူစီက တတန်းထဲ ။ ပူစီသည် လူသာငယ် နံမည်က တုတ်ကြီး ဆိုတဲ့ လူစားမျိုး ။ ငယ်ငယ်နဲ့ မိန်းမ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိနေသည် ။ သူ့ငပဲကလည်း ထွားပြီးရှည်သည် ။ ငယ်ငယ်ထဲက နွားကျောင်းရင်း မြစ်ထဲကို ခုန်ချ ရေကူးကြရင် ပူစီရဲ့ လထစ် ကို သူငယ်ချင်းတွေက တအံ့တသြ ဖြစ်ကြရသည် ။ သူ့ငပဲတန်က တခြား သူငယ်ချင်းတွေထက် သိသိသာသာ ကြီးနေလို့ ။ ရှည်လည်းရှည်နေလို့ ။ ပူစီသည် မိန်းမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကံကောင်းသူလို့လည်း ဆိုနိုင်သည် ။ ထန်း၇ည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးတောကြီးသည် သူကိုယ်တိုင်က ထန်းရည်ရောင်းပေမယ့် သူက ထန်းရည်ကို မသောက်ဘူး ။ သူ့အမျိုးတွေ ချက်တဲ့ ချက်အရက်( တောအရက် ) ကို ချသည် ။ ကဇော်သမားကြီး ဦတောကြီးသည် ထန်းရည်ဆိုင်ကို မနက်ပိုင်းလောက်ဘဲ လာလုပ်ပြီး နေ့လည်လောက်ထဲက သူ့တူ ဦးစီးနေတဲ့ တောအရက်ဆိုင်မှာ ရောက်နေတတ်သည် ။ တခွက်ပြီးတခွက် မြည်းရင်း အမြဲ ရေချိန်ကိုက်နေတတ်သူပါ ။ ပူစီကလည်း ဖင်ပေါ့ တော့ ပူစီရေ…လုပ်ပါအုံးကွာ..ဆိုပြီး ဦးတောကြီးက ပူစီ့ကိုဘဲ ဖိခိုင်းတတ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ကတော့ တောအရက်ဆိုင်မှာ ရောက်နေတတ်သည် ။
သူ့မိန်းမ မမြသွေးကဘဲ ထန်းရည်ဆိုင်ကို ပူစီရဲ့ အကူ အညီနဲ့ တာဝန်ယူနေရသည် ။ မမြသွေးသည် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး လုံးကြီးပေါက်လှလို့ ခေါ်ကြတဲ့ ရေဆေးငါးကြီး ဖြစ် သည် ။ ပူစီလည်း မမြသွေးနဲ့ အတူတူ ထန်းရည်ဆိုင်မှာ နေ့တိုင်း တာဝန်ယူ ကူညီရောင်းရတော့ ကဇော်ဘဲ မူးနေပြီး မိန်းမလိုအင်ကို မဖြည့်စွမ်းပေးတဲ့ ဦးတောကြီး လစ်ဟင်းနေတဲ့ လိင်ကိစ္စ အပိုင်းကို သူ့ကိုယ်စား ၀င်ရောက် တာဝန်ယူပေးရတော့သည် ။ ဦးတောကြီးရဲ့ မိန်းမ မမြသွေးသည် အရွယ်ရှိတုံး အရွယ်ကောင်းတုံးမို့ သွေးသား တောင့်တ လိုလားတဲ့အခါ အနီးကပ် အတူတူ ရှိနေတဲ့ ကျစ်လစ်တောင့်တင်းတဲ့ ကောင်လေး ပူစီနဲ့ ညိတော့တာဘဲ ။ ညဖက် ကြွက်လိုက်ထိုးပြီး ရတဲ့ ကြွက်တွေကို ဦးတောကြီး အိမ်ကို ပူစီ ယူလာတဲ့အခါ ဦးတောကြီးသည် တခူးခူးတရှူးရှူးနဲ့ အိပ်မောကျနေပြီ ။ မမြသွေးက ပူစီ ယူလာတဲ့ ကြွက်တွေကို ညတွင်းချင်းဘဲ ကိုင်ရသည် ။ ပူစီကကူညီရသည် ။ ခုတ်ထစ်ပြီးသား ကြွက်သားတွေကို ဆားဆနွင်းနဲ့ နယ်ဖတ်ပြီး မနက်စောစောမှာ ကြော်ဖို့ အိုးကြီးတလုံးထဲ နှပ်ထားကြရသည် ။ ဦးတောကြီး အိမ်နဲ့ ထန်းရည်ဆိုင်က သိပ် မဝေးလှဘူး ။ မမြသွးလည်း လင်ကြီးဆီက မရတဲ့ ကိစ္စကို အနားမှာ ရှိတဲ့ သနားကမား ပူစီနဲ့ ဖြေရှင်းပစ်ချင်သလို ပူစီကလည်း ဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့ တောင့်တင်းစိုပြေတဲ့ မမြသွေးကို စိတ်တွေ လာနေမိတာမို့ ရောင်းသူဝယ်သူ ကြည်ဖြူအသံတူသွားကြရတော့သည် ။ ဟောက်ပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့ ယောက်ျားကို စိတ်ပျက်စွာနဲ့ ကြည့်လိုက်ပြီး..“ ပူစီ..ထန်းရည်ဆိုင်ဖက် ခဏသွားကြရ အောင်…” လို့ ပူစီ့ကို လက်တို့ခေါ်သွားလိုက်မိသည် ။ ပူစီလည်း မမြသွေးနဲ့ ညအမှောင်ထဲ နှစ်ယောက်ထဲ ထန်းရည်ဆိုင်ဖက်ကို သွားရတာ ရင်တွေ တဒိုင်းဒိုင်း ခုံလွန်းနေရသည် ။ မမြသွေးလည်း အချိန်သိပ်မရှိလို့ အချိန်ဆွဲမနေတော့ဘူး ။ ပူစီ့ပေါင်ကြားကို လက်နဲ့ လှမ်းစမ်းကြည့်လိုက်သည် ။ မာကျောနေတဲ့ အတန်ချောင်းကြီးကို စမ်းမိသည် ။ “ ပူစီ..နင် လီးတောင်နေပါလား….နင် ငါ့ကို စိတ်ရှိနေတာလားဟင်…” “ အဲ..အား..မ…မ…ဟုတ်…” “ လုပ်မနေနဲ့ ပူစီ..မသိရင် ခက်မယ်..နင် ငါ ညနေဖက် ရေချိုးရင် လာလာ ချောင်းကြည့်နေတာ ငါသိတယ်…နင် စိတ်ထ၇င် ထတယ်ပေါ့..ငါ ဘယ်သူ့မှ မပြောပါဘူး….နင့်အရွယ်က မိန်းမ တအား စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုတာ ငါ နားလည်တယ်…လာ….လာ…ဒီနား…” ဆိုပြီး မမြသွေးက ပူစီ့လတန်ချောင်းကို ရှေ့နောက် ပွတ်တိုက် ကွင်းကစားပေးသည် ။ “ အိုး…အင်း….အမ…….အား….ဟင်း…..” လီးတန်ထိပ်ဖျားကို ဖိဖိချေနယ်ပေးနေပြန်တော့ ပူစီ အရမ်း ဖီလင်တက် ကောင်းနေသည် ။ သူ့လီးတန်လည်း ပိုပို ကြီးထွားလာသည် ။ “ လိုးမလား….” “ ဟုတ်..ဟုတ်….အမ…..” မမြသွေးက ထန်းရည်ဆိုင်ထဲက စားပွဲပေါ် တက်လိုက်ပြီး ထမိန်လှန်တင် ပေါင်ဖြဲကား ပေးသည် ။ မှောင်မဲနေပေမယ့် အသားဖွေးဖြူတဲ့ မမြသွေးရဲ့ ကိုယ်လုံးကို မထင်မရှားတွေ့နေရသည် ။ ပေါင်တန်ဖြူဖြူကြီးတွေ ကြားထဲကိုနေရာဝင်ယူလိုက်ပြီး မတ်ထောင်နေတဲ့ သူ့လီးနဲ့ မမြသွေးရဲ့ ပေါင်ကြား အကွဲကြောင်းကို ဖိထောက်လိုက်သည် ။ မမြသွေးရဲ့ စောက်ဖုတ်သည် သဘာဝ အရည်တွေနဲ့ စိုစိုရွှဲနေတာကို သိလိုက်ရလို့ သူမလည်း လိုလား နေပါလား ဆိုတဲ့ အသိကို ပူစီရလိုက်တော့ သူ့ထောင်နေတဲ့ ငပဲက ပိုတင်းသွားသည် ။
မမြသွေးက သူ့လီးတန်ကို လက်နဲ့ ဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ဝမှာ တေ့ပေးလိုက်တာနဲ့ ပူစီလည်း ဖိသွင်းလိုက်သည် ။ “ အီး…ရှီး…….ပူစီ..နင့်လီး တော်တော် ကြီးတယ်ဟာ….” လို့ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တဲ့ မမြသွေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို ဆက်ဖိသွင်းပစ်လိုက်သည် ။ “အီး…..ပူစီ….ဖြည်းဖြည်း….ရှီး…..” လို့ မမြသွေး ညည်းလိုက်သည် ။ ပူစီ ထင်တာက မမြသွေးသည် လင်ရှိတာမို့ လိုးလိုက်ရင် ပျစ်ကနဲ ခပ်ချောင်တောင်တောင် နေမည်လို့ ။ တကယ်တမ်းသွင်းလိုက်တော့မမြသွေးရဲ့ စောက်ဖုတ်သည်တကယ့်ကိုကြပ်ထစ်နေတဲ့ ကောင်းနေဆဲ စောက်ဖုတ် ဖြစ်နေသည် ။ ကြည့်ရတာ ဦးတောကြီးလည်း အရက်ဘဲ ဖိသောက်နေပြီး သူ့မိန်းမ မမြသွေးကို လိုးပုံမရဘူး ။ မမြသွေးလည်း တော်တော် ဆာနေပုံရသည် ။ ပူစီလည်း မမြသွေး ခြေထောက်တွေကို မြှောက်တင်ပူးကိုင်ပြီး ခပ်သွက်သွက်ညှောင့်ပေးသည် ။ မမြသွေးလည်း အား..အင်း…အင်း….နဲ့ ပူစီဆောင့်ထည့်တာတွေကို ခံနေပြီး“ ပူစီ..ငါအပေါ်က တက်ချင်တယ်….” လို့ ပြောသည် ။ ပူစီလည်း တခါမှ မိန်းမက အပေါ်က သူ့ကို တက်ချတာမကြုံဘူးသေးလို့ မမြသွေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲက သူ့လီးကို ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန် အိပ်ပေးလိုက်သည် ။ မမြသွေးလည်း ပူစီ့ကိုယ်ပေါ်ကို တက်ခွလိုက်သည် ။ ဒီအချိန်မှာ မမြသွေးလည်း ကိုယ်ပေါ် မှာ ဘာ အ၀တ်ကိုမှ ၀တ်မထားတော့ဘူး ။ ဖြူဖွေးတဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးက အောက်ကို တွဲမကျသေးဘဲ လုံးထစ်တင်းမာနေဆဲမို့ ပူစီလည်း နို့ကြီးတွေကို အားရပါးရ ဆုပ်နယ်နေမိသည် ။ မမြသွေးက ဖိဖိထိုင်လိုက် ထလိုက်နဲ့ တဟင်းဟင်း ညည်းရင်း ဆောင့်ပေးနေသည် ။ စောက်ဖုတ်နဲ့လီး ၀င်ထွက် ပွတ်တိုက်တဲ့ အသံတွေက တဖွတ်ဖွတ်နဲ့ ။မမြသွေးရဲ့ စောက်ဖုတ်က အိထွေးတင်းကြပ်ပြီး အရသာ ကောင်းပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် တက်ဆောင့်လိုးရတာလိုတော့ မဟုတ်ဘူး ။ မမြသွေး တက်ဆောင့်ပေးနေတာကို အားမရ ဖြစ်နေတဲ့ ပူစီလည်းခဏကြာတော့ ပုံစံပြောင်းရအောင် လို့ မမြသွေးကို ပြောလိုက်သည် ။ မမြသွေးကလည်း အေးဆေးဘဲ ။ စိမ်ပြေနပြေနဲ့ တ၀ကြီး အလိုးခံလိုက်ချင်သည် ။ လင်ဖြစ်သူ ဦးတောကြီးက အိပ်လိုက်ပြီ ဆိုရင်ဆင်အော်တာတောင် နိုးမှာ မဟုတ်ဖူးလေ ။ “ ဖင်ကုန်းပေးပါလား….” လို့ မရဲတရဲ တောင်းဆိုကြည့်လိုက်သည် ။ မမြသွေးက အာကြမ်းလျာကြမ်းမို့ သူ့ကို ဆဲထည့်လိုက်မလား ဆိုပြီး လန့်လို့ ။ ဒါပေမယ့် မမြသွေးက သဘောကောင်းသည် ။ “ အင်း…” လို့ အသံပြုရင်း ကွပ်ပျစ်စောင်းးမှာ လေးဖက်ကုန်းပေးလိုက်သည် ။
ဖင်ဝိုင်းဝိုင်း ဖြူဖြူကြီးကို မြင်ရတာနဲ့ စိတ်တွေက တအားဘဲ ထကြွနေရပြီး ဖင်တုံးတွေ ကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ် ဖေါင်းဖေါင်း အမြောင်းလိုက်ကြီးကလည်း ကုန်းယက်စုတ်လိုက်ချင်စရာပါဘဲ ။ မမြသွေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို သူ့လီးကြီး ထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန် နို့ကြီးတလုံးကိုလည်း သူလှမ်းဆွဲလိုက်သည် ။ သူ့လီးကြီးက စောစောက စသွင်းတုံးကလောက်တော့ မကြပ်တော့ဘဲ စီးကနဲ တဆုံး ၀င်သွားသည် ။ “ ပူစီ…..” “ အင်..မမြသွေး….” “ နင် ငါ့ကို လိုးချင်နေတာ ကြာပြီလားဟင်…ကောင်စုတ်လေး….” “ အင်း..ခင်ဗျား ဖင်က တကယ်တောင့်တယ်ဗျာ….” လေးငါးဆယ်ချက်လောက် ဆောင့်ထည့်ရင်း ပူစီက ပြောလိုက်တော့ မမြသွေးက ရယ်သည် ..။ “ ဦးတောကြီးက ခင်ဗျားကို မလိုးဘူးလား….” “ သူက အရေဘဲ အသေသောက်နေတာ နင်အမြင်ဘဲလေ….ကဲ လိုး..လိုး ခပ်ပြင်းပြင်းလေး လိုးပေးစမ်းပါ….” ပူစီလည်း အပြောမဟုတ်ဘဲ အလုပ်နဲ့ သက်သေပြပြီ ။ မမြသွေးကို ခပ်သွက်သွက် ပြင်းပြင်း ဆောင့်ချက်တွေ နဲ့ ဆောင့်လိုးပေးတော့သည် ။ တဖတ်ဖတ် အသံတွေ ညံနေသည် ။ ပူစီလည်း သူများ မယားကို လိုးနေတာမို့ သူ့လင်ကြီး အနောက်က ပေါ်လာပြီး ငှက်ကြီးတောင်နဲ့ ပိုင်းလိုက်မှာကိုလည်း စိတ်က ပူနေရလို့ နောင်ကို လိုးရင်တော့ ဒထက် စိတ်ချရတဲ့ နေရာ တခုခုမှာ လိုးရမည် လို့ ဆုံး ဖြတ်ချက် ချလိုက်သည် ။ မမြအေး ပြီးအောင် ဖိလိုးပေးလိုက်သည် ။ မမြအေး ပြီးသွားမှ နိုင်ငံခြား အပြာကားတွေမှာ တွေ့ဖူးသလို လီးကို ပြီးခါနီးမှာ စောက်ဖုတ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး မမြသွေးရဲ့ ဖင် တုံး ဖြူဖြူကြီးတွေ အပေါ်မှာ သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်ကာ ပြီးသွားရသည် ။ သူတို့ လမ်းခွဲခါနီးမှာ မမြသွေးက ပူစီ့ကို ဘယ်သူ့ကိုမှ လျောက်မပြောဖို့ ပိတ်သည် ။ ပူစီက “ ပြောပါ့မလားဗျာ..ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးသလိုကြီး ဖြစ်နေမှာပေါ့….” လို့ ပူစီက ပြန်ပြောရင်း သူ့ အိမ်ကို ပြန်သည် ။ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး အမေ ချန်ထားတဲ့ ဟင်းကို ဇလုံနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ ထမင်းပေါ် ပုံလိုက်ပြီး အားရပါးရ စားလိုက်သည် . ။ စိတ်လာလာနေရတဲ့ ဖင်ကြီးမ မမြသွေးကို စိတ်တိုင်းကျ လိုးခွင့်ရလိုက်လို့ ပူစီ တအား ကျေနပ်နေသည် ။ နောက်တနေ့မှာ ဦးတောကြီးတို့ ဆိုင်ကို သွားကူတော့ မမြသွေးကို တွေ့တော့ ညက လိုးခဲ့တာတွေကို ပြန် ညမင်ယောင်ပြီး လီးက မာတောင့်ချင်လာသည် ။ ဦးတောကြီးကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ထန်းရည်ဆိုင်မှာ ခဏဘဲ နေပြီး တောအရက်ဆိုင်ဖက်ကို လစ်တော့တာဘဲ ။ ဆိုင်ထဲမှာ လူမရှိတဲ့ အချိန်မှာ မမြသွေး အနားကို တိုးကပ်သွားပြီး ဖင်တုံးကြီးတွေ ကြားထဲကို လက်နဲ့ နှိုက်လိုက်ပြီး..“ လိုးချင်တယ်ဗျာ..” လို့ သူ ပြောလိုက်သည် ။ မမြသွေးက…“ မကဲနဲ့ ကောင်စုတ် လေး..သိသွားလို့ မိုးမီးလောင်ကုန်မယ်….” လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပြီး သူ့လက်ကို ပုတ်ထုတ်လိုက်သည် ။ “ ဒီညရော ပေးလိုးမှာလား…” လို့ သူ မေးဖြစ်အောင် မေးလိုက်သည် ။ “ နင် လျာမချောင်နဲ့ ပူစီ….” လို့ ထပ်အော်တာကို ခံရသည် ။ ဒီအချိန်မှာ လူတယောက် ၀င်လာသည် ။ “ ဟေ့..ပူစီ…မင့်ကြွက်ကြော် ရှိသေးလား….” “ ဟာ..ကိုကြည်စိုး…ရှိတာပေါ့…ထန်းရည် သောက်မှာ မဟုတ်လား….ထိုင်..ထိုင်….” “ မသောက်ဖူးကွ…ကြွက်ကြော်ဘဲ လာဝယ်တာ..ငါ့သူဌေး စားဖို့….” “ ဟုတ်..ရတယ်..ဘယ်နှစ်ကောင် ယူမလဲ….” ပူစီက နီရဲ ကြွပ်ရွနေတဲ့ ကြွက်ကြော်တွေကို ဇကာကုံးနဲ့ ယူထုတ်လာသည် ။ “ အကုန်သာ ပေးလိုက်ကွာ..ငါ့သူဌေးက မင့်ကြွက်ကြော်ကို အသေကြိုက်တာကွ…” ကိုကြည်စိုးသည် ရွာထဲက သူဌေး စက်ပိုင် ဦးလူထုန်ရဲ့ စာရင်းငှား ဖြစ်သည် ။ သူဌေးရဲ့ လူယုံတယောက်လို့လည်း ဆိုနိုင်သည် ။
ပူစီကို ဦးလူထုန်က အလုပ်ရှိရင် ခေါ်ခေါ် ခိုင်းတတ်သည် ။ ကိုကြည်စိုးနဲ့ ပူစီ ခင်မင်အောင် ပေါင်းထားသည် ။ ကိုကြည်စိုးက သူဌေးကို သူ့ကို အလုပ်ခိုင်းဖို့ သတိပေး ပြောပေးနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်သည် ။ ကြွက်ကြေ်ာဖိုးကိုလည်း လျော့ပေးလိုက်သည် ။ “ ကိုကြည်စိုး…ခင်ဗျား သူဌေးကို ကျနော့်ကိုလည်း ခေါ်ခိုင်းဖို့ ပြောပေးအုံးနော….” “ ဟ..ကောင်လေးရ..ငါ အမြဲ သတိဖေါ်ပေးနေတာဘဲကွ…စိတ်ချပါ..သူဌေးရော သူဌေးကတော်ရောက မင်းကို သဘောကျကြပါတယ်…ခေါ်ကြမှာပါ…..” “ ဟီး..ကျေးဇူးဘဲဗျာ..ကျနော် ယုန်ရရင် ကင်ပြီး သူဌေးစားဖို့ လာပို့ချည်အုံးမယ်….” “ အေး..အေး..ကဲ ငါသွားမယ်ကွာ….” ကိုကြည်စိုး ပြန်သွားပြီးနောက် ရွာတောင်ပိုင်းက ကြာဇံတို့ အုပ်စု ထန်းရည် လာသောက်ကြလို့ မမြသွေးနဲ့ ထပ် မကလိဖြစ်တော့ ။သူဌေးဦးလူထုန်နဲ့ ရွာထဲမှာ ဘုန်ကြီးကျောင်းမှာ လူချင်းတိုးရင် ပူစီက အမြဲရိုရိုကျိုးကျိုးနဲ့ ဂါဝရပြုသည် ။ မကြာခင်မှာဘဲ သူဌေးရဲ့ ခြံစည်းရိုး အသစ်ကာဖို့ လိုလာတော့ စာရင်းငှားကိုကြည်စိုး တယောက်ထဲနဲ့ မနိုင်လို့ ကူညီဖို့ ပူစီ့ကို ခိုင်းသည် ။ သူဌေးရဲ့ သမီးနှစ်ယောက်ကလည်း ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်တဲ့ လူငယ်လေးတယောက် သူတို့ အိမ်မှာ အလုပ်လာလုပ်တာမို့ ဟန်ရေးပြပြီး မသိမသာ ချောင်းကြည့် ခိုးကြည့်ကြသည် ။ ပူစီလည်း သူဌေးရဲ့ သမီးအကြီးနဲ့ ကျောင်းနေဖက်မို့ မျက်မှန်းတန်းမိနေသည် ။ သူဌေးသမီး မို့ မာနတခွဲသားနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ရီရီထုန်သည် အငယ်မစီစီထုန်လောက် သဘောမကောင်းဘူးလို့ ပူစီထင်သည် ။ သူဌေးရဲ့ ခြံဝိုင်းက ကျယ်သည် ။ စည်းရိုးကာတာက တရက်နှစ်ရက်နဲ့ မပြီး ။ ပူစီလည်း သူ့ကို ချောင်း မြောင်းနေတဲ့ သူဌေးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ တဖြည်းဖြည်း နီးစပ်လာခဲ့သည် ။ သူဌေးလင်မယား အပြင်သွား နေတဲ့ အချိန် ပူစီက အိမ်နောက်ဖေးကနေ မီးဖိုချောင်က ရေအိုးစင်ကနေ ရေသွားခပ်သောက်တဲ့အခါ သူ ဌေးသမီးအငယ်မစီစီထုန်နဲ့ တိုးတတ်သည် ။ စီစီထုန်က ခင်ခင်မင်မင် စကားပြောသည် ။ နေ့လည် ထမင်းစား တဲ့ အချိန်မှာတော့ သူဌေးအိမ်မှာ ထမင်းဟင်းချက်တဲ့ ဒေါ်ပုက ပူစီနဲ့ကိုကြည်စိုးကို ထမင်းပြင်ကျွေးတဲ့အချိန် သမီးအကြီး ရီရီထုန်က လာစကားပြောတတ်သည် ။ အကင်းပါးတဲ့ ကိုကြည်စိုးက သူဌေးရဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်က ပူစီ့ကို စိတ်ဝင်တစား ရှိနေကြတယ် ဆိုတာကို မြင်သည် ။ ရိပ်မိသည် ။ ခြံစည်းရိုးကာရင်း “ ဟေ့ပူစီ..မင်းကို ငါတို့သူဌေးရဲ့ သမီးတွေက ကျနေပုံဘဲ…ရေလာ ချင်လို့ မြောင်းပေးနေကြတယ်ကွ…လုပ်ကွာ..ဟီး…မင်း သူဌေးသားမက် ဖြစ်မယ့်ကိန်းကွ….လုပ်သာလုပ်…” လို့ ပူစီ့ကို မြှောက်ပေးသည် ။ ပူစီကလည်း လက်ကသွက်တဲ့ကောင် ။ ဦးတောကြီးရဲ့ မိန်းမ မမြသွေးကိုတောင် ဆော်ပြီးနေပြီဘဲ ။ ဒါပေမယ့် သူဌေးရဲ့စာရင်းငှား ကိုကြည်စိုးကိုတော့ သူဖန်ချင်နေတာကို ပြောလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ ။ တော်ကြာ မျက်နှာလိုအားရ သူဌေးလင်မယားကို သွားတိုင်သွားတွန်းနေမှ ခက်နေမယ် ။ ဒါကြောင့်..“ မတန်မရာဗျာ…ကျနော် က ဆင်း၇ဲသား ပါ…မကြံဝန့်ပါဘူး…မလုပ်ပါနဲ့ တော်ကြာ သူဌေးတို့ သိလို့ ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးနေရပါအုံးမယ်” လို့ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။ သို့ပေမယ့် ကိုကြည်စိုး အလစ်မှာတော့ ရီရီထုန် စီစီထုန်တို့နဲ့ စကားပြောသည်။ ပြောတိုင်းလည်း သူတို့ကို အ ရမ်းလှသည် ချောသည် လို့ ပင့်မြှောက်ပေးတတ်သည် ။
ရီရီထုန်ကလည်း သူ့ညီမလေး စီစီထုန်က ပူစီ့ကို ရော လွန်းနေတာကို မနားလို ဖြစ်ပြီး သူက ညီမထက် ပိုသာချင်တာကြောင့် ပူစီနဲ့ နေ့ခင်းပိုင်း အခုလို ခြံကာနေတဲ့ အချိန် စကားပြောရတာနဲ့ မကျေနပ်ဘဲ ညဖက်ကျရင် နှစ်ယောက်ချင်း စကားပြောချင်လာပြီး ပူစီ့ကို သူ့မိဘ တ ခြားရွာကို ညအိပ်သွားတဲ့ညမှာ နွားတင်းကုတ်ရဲ့ အနောက်ဖက်က စပါးတွေ လှောင်တဲ့ စပါးကျီကြီးမှာ စကားပြောဖို့ ချိန်းလိုက်သည် ။ ဦးလူထုန်တို့ လင်မယားလည်း ညအိပ်ခရီးသွားမှာမို့ အိမ်မှာ သမီး၂ယောက်နဲ့ ကျန်ခဲ့မယ့် အိမ်အကူ ဒေါ်ပုကို နေ၀င်တာနဲ့ ခြံတံခါးရော အိမ်တံခါးတွေကိုရော ပိတ်ဖို့ သော့ခတ်ဖို့ သေသေချာချာ မှာကြားသွားသည် ။ ကျေး ရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ( ယခင်အခေါ်အဝေါ် သူကြီး ) ကိုလည်း သူတို့ ဒီည မရှိတာမို့ သူတို့အိမ်ဝိုင်းကို လုံခြုံရေး ကင်းတွေ လှည့်ခိုင်းဖို့ မှာကြားသွားသည် ။ သူဌေးလင်မယားတို့သည် ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတာတွေ များလို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဘိုကြီးတို့အဖွဲ့က သူဌေးလင်မယားကို တအား လေးစား ရိုသေသည် ။ ဦးဘိုကြီးရဲ့ အဖေက သူဌေးလင်မယားရဲ့ စာရင်းငှား လုပ်ခဲ့ဘူးသည် ။ သူ့အဖေကိုယ်တိုင်က သူဌေးရဲ့ စကားဆို တသွေမတိမ်း နားထောင်သည် ။ဒါကြောင့် ဦးဘိုကြီးသည် သူဌေးတို့လင်မယားကို ပြာပြာသလဲ ရိုသေသည် ။ ငွေချမ်းသာသောအခါ သြဇာရှိလှသည် ။ ရွာထဲက လူတွေက သူဌေးဦးလူထုန်က သူကြီးရဲ့ အထက်က လို့ ကွယ်ရာမှာ တီးတိုးစကား ပြောလေ့ရှိသည် ။ ပူစီသည် ရီရီထုန်က အဲလို ချိန်းလိုက်တဲ့အခါ အရမ်းကို အံ့သြသွားခဲ့သည် ။ သူနဲ့ ရီရီထုန်က ဘာမှ ဖြစ်ကြ သေးတာ မဟုတ်ဘူး ။ တယောက်နဲ့ တယောက် စကားပြောကြတယ် ဆိုတာကလည်း အလပသလပဘဲ ။ ချစ်စ ကား ကြိုက်စကားလည်း ပြောရသေးတာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒါပေမယ့် ရီရီထုန်က အခုလို ညဖက်ကြီး ချိန်းလိုက်တာ က ခင်မင်မှု အတိုင်းအတာထက် ကျော်လွန်သွားပြီလို့ သူ ထင်သည် ။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီည ရီရီထုန်နဲ့ သွား တွေ့လိုက်ပြီးသူ လက်ရဲရင် ရီရီထုန်ကို စားရနိုင်သည်လို့ တွက်လိုက်သည် ။ တနေကုန် ခြံစည်းရိုးကာခဲ့ပြီး ညနေဖက်လည်း မမြသွေးတို့ ထန်းရည်ဆိုင်မှာ သွားကူတဲ့ ပူစီသည် တအားကို ပင်ပန်းနေပြီ ။ သို့ပေမယ်က ၇ီရီထုန်နဲ့ တွေ့ရမှာမို့ အိမ်ပြန်ပြီးေ၇တွင်းမှာ ရေချိုးလိုက်သည် ။ သူဌေးသမီးနဲ့ တွေ့မှာမို့ ချွေးစော် နံမနေချင် ။ မသစ်လွင်ပေမယ့် လျှော်ဖွတ်ပြီးသား စွပ်ကြယ်အဖြူလေးနဲ့ တပတ်နွမ်း ပလေကပ်လုံချည်လေး ၀တ်လိုက်သည် ။ အမေက သိပ် နေလို့မကောင်းဘူး ။ အိပ်ရာထဲ လှဲနေသည် ။ ညနေက ထန်းရည်ဆိုင်ကို လာတဲ့ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဘိုကြီးက ပူစီ့ကို အနားခေါ်ပြီး ညဖက် ရွာထဲမှာ ကင်းစောင့်ပေးမလား…မေးသည် ။ မင်းလည်းအပိုငွေလေးဘာလေး ရတာပေါ့ကွာတဲ့ ။ တကယ်တော့ ပူစီသည် နေ့ခင်းလည်း ခြံကာ ညနေလည်း ထန်းရည်ဆိုင်မှာ ရောင်းကူ ဆိုတော့ ပင်ပန်းလှပြီ ။ ဒါပေမယ့် ဦးဘိုကြီး ပြောလိုက်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ စကားတွေကိုလည်း ကြားလိုက်ရရော ချက်ချင်းဘဲ “ လုပ်မယ်..သူကြီး….လုပ်ပေးမယ်…စိတ်ချ ” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ဦးဘိုကြီးက “ ဦးလူထုန်တို့ တခြားရွာကို သွားတယ်ကွ..သူ့အိမ်ဝိုင်းကို အထူးသဖြင့် ဂရုစိုက်ပေးဖို့ဘဲတခုခု မသင်္ကာစရာတွေ့ရင် ငါ့ကို လာသတင်းပို့ရမယ်…” လို့ ပြောလိုက်လို့ပါဘဲ ။
ရီရီထုန်နဲ့က ချိန်းထားတော့ သူက အဲ့ခြံဝိုင်းထဲမှာ ရောက်နေမှာကိုး..။ တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် ဖြစ်မည်လေ ။ ကင်းလည်းစောင့် သူဌေးသမီးနဲ့လည်း ချိန်းတွေ့ ။ ဟန်ကို ကျရော ..။ ဦးတောကြီးသည် ဒီနေ့ညနေ ခါတိုင်းနေ့တွေထက်တောင် အသောက်များသွားလို့ လမ်းတောင် ကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင် ။ ဒရိမ်းဒယိုင်နဲ့ သိုင်းကွက်နင်းနေသည် ။ မမြ့သွေးက ဆိုင်သိမ်းနေတဲ့ ပူစီ့ကို လှမ်းကြည့်သည် ။ ပြုံးစိစိနဲ့ ။ “ ပူစီ..” “ ဘာလဲ အမ..” “ ရောင်းမကုန်တဲ့ ကြွက်ကြော်နဲ့ ထမင်းကြမ်းလေး စားလိုက်ပါလား..နင် မဆာဘူးလား….” “အင်း..အင်း…စားလိုက်မယ်…” “ ကြက်ဥကြော်တွေပါ အကုန် စားလိုက်…အမဲခြောက်ဖုတ်ရော…” ပူစီရဲ့ စိတ်ထဲက “ အမဲခြောက်ဖုတ်တော့ မစားချင်ဘူး..အမရဲ့ စောက်ဖုတ်ဘဲ ကြိုက်တယ်…” လို့ ပြောလိုက် သည် ။ ဦးတောကြီး ရှိနေသေးလို့ အသာ ငြိမ်နေရသည် ။ ခဏကြာတော့ ဦးတောကြီး အိမ်ပြန်သွားသည် ။ မှောင်နေပြီ ။ မမြ့သွေးက မီးအိမ်ကို မထွန်းသေးဘဲ ထားသည် ။ “ ပူစီ..ငါ အိမ်ဖက် ခဏသွားလိုက်အုံးမယ်..နင် ဒီကဘဲစောင့်..ငါ ပြန်လာခဲ့မယ်..ဟိုဟာကြီး အိပ်သွားပြီလား ငါ သွားကြည့်မလို့…” ပူစီလည်း မမြ့သွေး ပြောတဲ့အတိုင်း ထမင်းကြမ်းနဲ့ ကြွက်ကြော်..ကြက်ဥကြော်တွေ ဇလုံတခုထဲ ထည့်ပြီး ငရုပ် ဆီ အချဉ်ရည်တွေလောင်းထည့်ကာ စားလိုက်သည် ။ အားရှိမှ ဖြစ်မည်လေ ။ ဟီး…မမြ့သွေးကို ကောင်းကောင်းဗျင်းပေးရဦးမယ် မဟုတ်လား …။ မမြ့သွေးက တော်တော်နဲ့ ပေါ်မလာ ။ ရီရီထုန်နဲ့ ချိန်းထားတဲ့နေရာကိုလည်း သူ သွားရဦးမှာမို့ မမြ့သွေး ကို သူ မျှော်နေသည် ။ မမြ့သွေး ရောက်လာတော့ “ ရေချိုးနေလို့ ကြာနေတာဟဲ့..တနေကုန် ဆိုင်ရောင်းနေ တာ နင်လည်း သိသားဘဲ..ချွေးတွေသန်တွေနဲ့….” လို့ ပြောပြီး ဆိုင်လေး အတွင်းဖက်က ကွပ်ပျစ်ပေါ်ကို ထိုင် လိုက်သည် ။ “ ပူစီ….လာ…အချိန် သိပ်မရှိဘူး….ဟိုဟာကြီးတော့ ကုလားသေကုလားမောဘဲ ဟောက်တောင်နေသေး…ခိခိခိ….” ပူစီရဲ့ ပုဆိုးကြားကို မမြသွေး လက်ထိုးစမ်းလိုက်တဲ့အခါ မာကျောပြီး တောင်နေတဲ့ ပူစီရဲ့ ဒုတ်ကြီးကို စမ်းမိ လိုက်လို့ အရမ်း သဘောကျသွားသည် ။ လီးမတောင်တော့တဲ့ လင်ကြီးနဲ့ တခြားစီဘဲလေ ။ ဦးတောကြီးနဲ့ လိုးဖို့ ကြံရင် လပျော့ကြီးကို ကွင်းတိုက်ပေးရ ကုန်းစုတ်ရနဲ့ အားမရဘူး မဟုတ်လား ။ ပူစီက ပုဆိုးကို ချွတ်ချပစ်လိုက်သည် ။ တဲပြူတင်းက ၀င်လာတဲ့ လရောင်နဲ့ မဲပြောင်တုတ်ထွားရှည်လျားတဲ့ ပူစီရဲ့ လီးကြီးကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ မြင် လိုက်ရတဲ့ မမြသွေးလည်း ဖျတ်ကနဲ ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိသည် ။ “ အမ..စုတ်ပေးဗျာ….” မမြသွေးလည်း လပျော့ကြီးတောင် စုတ်စုတ်ပေးနေရတာ ဆိုတော့ ပူစီရဲ့ အောင်မြင်လှတဲ့ လီးထွားထွားကြီး ကို မဆိုင်းမတွဘဲ ငုံ့ကာ ငုံစုတ်ပေးလေသည် ။ ပြွတ်ပွက် ပြွတ်ပွက် အသံတွေ ထွက်အောင်ကို အားရပါးရ စုတ်ပေးနေသည် ။ မမြသွေးရဲ့ အစုတ်ကို ခံနေရင်း ပူစီသည် နားလည်းစွင့် မျက်လုံးကလည်း တဲပြူတင်းကို ကြည့်နေသည် ။ ခိုးစားတာ ဆိုတော့ လူမိမှာ ကြောက်သည်လေ ။ တချက်တချက် လီးထိပ် ဒစ်လုံးကြီးကို မမြသွေးရဲ့ လျာက လှိမ့်ပွတ်သွားတာကြောင့် ပူစီ တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ တုန်အောင် ကောင်းသွားရသည် ။
မမြသွေး ပါးစပ်ထဲကို ထိုးထိုးညှောင့်လိုက်မိသည် ။ အတော်ကြာအောင် စုတ်ပေးပြီးတဲ့နောက် မမြသွေးသည် ဂွေးစိနှစ်လုံးကိုလည်း လျာနဲ့ ယက်ပေးပြန်သည် ။ ပြီးမှ “ ကဲ လိုးမယ်ဟာ….မညှာနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းသာ ဆောင့်..ငါ တအား ယားနေတယ်….” လို့ ပြောလိုက်သည်။ ပူစီလည်း လိုလားနေတဲ့ မမြသွေးကို အပီ လိုးပြီ ။ တဖတ်ဖတ် အသံတွေနဲ့ မမြသွေးရဲ့ ညည်းသံတွေ ညအမှောင်ထဲ ထန်းရည်တဲ အတွင်းပိုင်းကနေ ထွက်နေသည်။ မမြသွေးရဲ့ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ကိုင်ဆွဲညှစ်ထားရင်း ဒလကြမ်း ဆောင့်ထည့်သည် ။ “ အား….ရှီး…….အိုး……အား…..ကောင်းတယ်…..လိုး…လိုး….ပူစီ..ဆောင့်…ဆောင့်…တအား..တအား…..” လို့ မမြသွေး ပါးစပ်က တတွတ်တွတ် ပြောနေရင်း ဖင်ကြီးတွေကို ဝေ့ကာဝေ့ကာ နဲ့ လှည့်ပေးနေသည် ။ ပူစီက မမြသွေး စိတ်ကြိုက် အပီအပြင် ဆောင့်ပေးသည် ။ လီးကလည်းကြီး အားကလည်းသန်နဲ့မို့ မမြသွေး တအား ကြိုက်သည် ။ ဒါကြောင့်လည်း ပူစီ့ကို တခါလိုးဖူးသွားပြီးနောက် စွဲသွားရပြီး ထပ်ပေးမိတာပါ ။ “ ဖွတ်..ဖွတ်…ဖွတ်……အား……အား…..အားရှီး…..အိုး…ကောင်း..ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ်….လိုး……လိုး….” အသားကုန်ကြုံးလိုးပစ်လိုက်တာ မမြသွေးလည်း ပြီး သူလည်း ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ပြီးသွားရသည် ။ “ အီး…..တအားကောင်းတာဘဲ ပူစီရယ်….” မမြသွေးလည်း သူ့အိမ်ပြန် ပူစီလည်း ရွာသူကြီး ဦးဘိုကြီး အိမ်ကို ခပ်သုတ်သုတ် သွားလိုက်သည် ။ “ ဟာ..ပူစီ….မင်း မလာတော့ဘူး မှတ်လို့….အာလူးကိုတောင် ခေါ်တော့မလို့…” “ ဟီး….နဲနဲ နောက်ကျသွားတယ်..သူကြီး….” ဦးဘိုကြီးက ခြောက်တောင့်ထိုး လက်နှိပ်မီး တချောင်း ထုတ်ပေးသည် ။ “ ဟိတ်ကောင်လေး..မင်း မနက်ကျ ဒီလက်နှိပ်မီးကို ငါ့အိမ်ကို ပြန်လာပို့ဖို့ မမေ့နဲ့နော်..မပျောက်စေနဲ့..” “ စိတ်ချပါ သူကြီး….”းဦးလူထုန် “ ပူစီ….ငါ့လှံပါ လိုရမယ်ရ ယူသွားအုံး …” ဦးဘိုကြီးက လှံတချောင်းကိုပါ လှမ်းပေးနေလို့ ပူစီ ယူလိုက်ရသည် ။ ရီရီထုန်တို့ အိမ်ဖက်ကို သူ သွားပြီ ။ စိတ်တွေက လှုပ်ရှားနေသည် ။ ရီရီထုန်နဲ့ ဘာပြောကြမလဲ ။ အင်း…ကြည် ဖြူရင်တော့ ဖက်နမ်းပစ်မည် လို့ စဉ်းစားနေသည် ။ ခွေးတကောင်က စူးစူးဝါးဝါး ထိုးဟောင်လိုက်လို့ ပူစီ ပါးစပ်က ရှူးလို့ အော်ရင်း လှံနဲ့ ရမ်းလိုက်သည် ။မပြီးသေးတဲ့ စည်းရိုး ပြင်နေတဲ့နေရာကနေ ပူစီ ခြံထဲကို ၀င်လိုက်သည် ။ ခြံနဲ့အိမ်ကြီးသည် မဲမှောင် တိတ်ဆိတ်နေသည် ။ နွားတင်းကုတ်ဘေးကနေ ဖြတ်ပြီး စပါးကျီကြီးဆီကို လျှောက် သွားတဲ့အချိန် အိမ်ကြီးဖက်က လျှောက်လာတဲ့ ရီရီထုန်ကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ ရီရီထုန် အနားကို ရောက်လာတော့ လက်ကလေးကို ဖမ်းဆုပ်ကိုင်လိုက်သည် ။ ရီရီထုန်က ဆတ်ကနဲ မော့ပြီး ကြည့်သည် ။ “ လာ…ရီရီ…” လို့ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်ပြီး စပါးကျီကြီးရဲ့ အနောက်ထဲကို ခေါ်သွားလိုက်သည်။ “ ပူစီ….ဘာ…ဘာလုပ်မလို့လဲ….” “ နင်ဘဲ ငါနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စကားပြောချင်လို့ဆို…ဒါကြောင့် လူမမြင်နိုင်တဲ့ ဟောဒီချောင် ထဲကို ခေါ်လာတာလေ…” “ အေး..အငယ်မက ငါတို့ စကားပြောကြရင် ၀င်ဝင်ရှုပ်တယ် ..ဒါ..ဒါကြောင့်..ငါ..ငါ…” “ အေးပါ..ငါသ်ပါတယ်..ငါ လဲလေ..ငါကလဲ………” “ ဘာလဲဟယ်…ပြောလေ…” “ ငါကလည်း နင့်ကို ခုလို တွေ့ချင်နေတာ…သိလား…” “ ဘာလို့ တွေ့ချင်တာလဲ…” “ နင်က သိပ်လှတာဘဲဟာ…ငါ အဲဒါ ပြောချင်လို့..” “ အာ..ငါ မလှပါဘူး..အပိုတွေ မြှောက်မနေနဲ့..ပူစီ….”ှာက “ နင် တကယ်လှတာ….အင်း..ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်ဟာ..အရမ်းဘဲ….” “ အို…ပူစီ…” ပူစီက ရုတ်တရက် ဆွဲဖက်လိုက်လို့ ရီရီထုန်သည် ပူစီ့ရင်ခွင်ထဲကို ရောက်သွားရသည် ။
ယောက်ျားတယောက်နဲ့ အခုလို ရင်ချင်းအပ် အနေအထားမျိုး ရီရီထုန် တခါမှ မကြုံဘူးသေး ။ ရီရီထုန်ရဲ့ ရင်မို့မို့တင်းတင်းတွေက ပူစီ ရဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ တသားထဲကျအောင် ကပ်သွားသည် ။ “ နင် ငါ့ကို ပြန်ချစ်ပါဟာ..ရီရီ…..နော်…နော်…..” ပူစီက ရီရီထုန်ရဲ့ မျက်နှာအနှံ့ နမ်းရှုံ့ရင်း တတွတ်တွတ်နဲ့ ပြောသည် ။ ရီရီထုန်လည်း စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလွန်းလို့ တုန်နေသည် ။ ပူစီရဲ့ လက်တွေက ရီရီထုန့် ခါးလေးကနေ ဆွဲဖက်ထားတာ ရီရီထုန် ရုန်းထွက် ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် မရဘူး ။ “ လွှတ်ပါ ပူစီရယ်…နင်က တအား ကြမ်းတာဘဲ…” “ မလွှတ်ဘူး…လွှတ်စေချင်ရင် ချစ်တယ်လို့ ပြန်ဖြေ….” “ ငါ..ငါ..မသိဘူး….ကြောက်တယ်….ငါကြောက်တယ်…..” ပူစီက ရီရီထုန်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ငုံစုတ်လိုက်သည် ။ ပူစီသည် နိုင်ငံခြား ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်ပြီး ယောက်ျားက မိန်းမကို နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုတ်တဲ့အခန်းတွေကို အားကျပြီး အဲလိုမျိုး စမ်းချင်နေတာ ကြာပြီ ။အခု အခါအခွင့် သင့်တုံး စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်တာ ။ ရီရီထုန်လည်း သူ့အထိအတွေ့တွေမှာ သာယာနေတာကို ပူစီ တွေ့ရလို့ စိတ်အားတွေ တက်လာပြီး လက်တွေကလည်း ရီရီထုန့် တင်ပါးအိအိတွေကို ကိုင်လိုက်သည် ။ ရီရီထုန်လည်း ပူစီ့ကို တဖက်သပ် သဘောကျ ကြိုက်နေတဲ့သူ ဆိုတော့ ပူစီရဲ့ အတွေ့အထိတွေ ခေါ်ဆောင်ရာကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ပါသွားမိ ရပြီ ။ “ ငါ့ကို ချစ်တယ် မဟုတ်လား..” “ နင်ကလဲဟာ..နင့်ကို အခုလို ညဖက်ကြီး လူကွယ်ရာမှာ ချိန်းကထဲက နင် သဘောပေါက်လိုက်ဖို့ ကောင်းတယ် ပူစီရယ်…” “ ဒါဆို နင် ငါ့ကို ပြန်ချစ်တယ်ပေါ့..ဟုတ်လား…” ရီရီထုန်က ခေါင်းလေး ဆတ်ပြသည် ။ “ ဟာ…၀မ်းသာလိုက်တာ ရီရီရယ်…” ပူစီက ရီရီထုန်ကို နမ်းပြန်သည် ။ လက်တွေကလည်း တင်ပါးအိအိတွေကို ဆုပ်ညှစ်ကိုင်တွယ်သည် ။ ရီရီထုန့် ရင်သားတင်းတင်းတွေနဲ့ ရင်ချင်းအပ်ထားရတာကြောင့်လည်း ပူစီ့စိတ်တွေ တအားကို ထကြွနေပြီး ပေါင်ကြား က ငပဲတန်က မြူးထလာသည် ။ မာတောင်လာသည် ။ စပါးကျီအနောက်ဖက် စပယ်ရုံကြီး အကွယ်က ကွပ်ပျစ်လေးပေါ်ကို ထိုင်ချလိုက်ကြပြီး ရီရီထုန်နဲ့ ပူစီသည် ကာမ စိတ်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေကြပြီမို့ ရှေ့ကို တခုပြီးတခု တိုးလို့ တိုးလို့ တက်နေကြပြီ ။ ပူစီသည် မိန်းမ အတွေ့အကြုံ ရှိနေတဲ့ကောင်မို့ ရီရီထုန်ကို စိတ်မကြွကြွအောင် ဆွပေးနေပြီ ။ သူ့ရဲ့ အနှူးအနှပ်တွေကြောင့် ရီရီထုန်သည် ထမိန်တွေ ကွက်စိုသွားရအောင်ဘဲ အင်္ဂါစပ်ထဲက ကာမရှေ့ပြေး အရည်တွေ တအား စိမ့်ထွက်နေသည် ။ ပူစီ့လက်တွေက ရီရီထုန့် ထမိန်ထဲ ရောက်နေပြီး အမွှေးလေးတွေ ဖုံးနေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို ကိုင်စမ်းနေသည် ။ အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေတာကို စမ်းမိလို့ ရီရီထုန် စိတ်တွေ ထနေပြီ ဆိုတာကို ပူစီ သိလိုက်သည် ။ “ ပူစီရယ်….တော်….တော်တော့ဟာ…..ငါ..ငါတို့ တအား လွန်မိနေပြီ ထင်တယ် …..” ပူစီက သူ့ပုဆိုးကို ဖြေချပြီး မာတောင်နေတဲ့ လိင်တန်ပူနွေးနွေးကြီးကို ရီရီထုန့်လက်ထဲကို အတင်း ဆွဲထည့်ပေးတော့ ရီရီထုန်လည်း ကြေက်လန့်တကြား အသိဝင်လာပြီး ပူစီ့ရင်ခွင်ထဲက အတင်း ရုန်းထွက်လိုက်သည် ။
ဒါပေမယ့် ပူစီရဲ့ သန်မာတဲ့ လက်တွေက ရီရီထုန့်ကို သူ့အနားက ထွက်သွားခွင့် မပြုဘူး ။ သူ အတင်း ကိုင် ခိုင်းတာနဲ့သူ့လိင်တန်ကြီးကို ကိုင်ရပြန်ပြီး သူပွတ်ခိုင်းသလို ရှေ့နဲ့နောက် ပွတ်တိုက်ပေးရသည် ။ သူကလည်း ရီရီထုန့် အင်္ဂါစပ်ကို ပွတ်ပေးနေသည် ။ နင် ငါ့ကို ချစ်တယ် မဟုတ်လားဟင် …ရီရီ…. ရီရီထုန်လည်း ခေါင်းညှိမ့်ပြရင်း ချစ်တယ် ပူစီ….လို့ ဖြေလိုက်သည် ။ ပူစီက ရီရီထုန့်ကို ကွပ်ပျစ်ပေါ်ကို ဆွဲလှဲချလိုက်သည် ။ “ အို့..အမေ့…ပူစီ…ဘယ်လိုဖြစ်…..” ပူစီရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေက ရီရီထုန်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဖိကပ်စုတ်လိုက်လို့ ရီရီထုန် ဆက်မပြောနိုင်တော့ ။ ပူစီ့လက်တွေက ရီရီထုန့် အ၀တ်တွေကို လှန်တာလှန် ချွတ်တာချွတ်နေရင်း ဆူတင်းမို့မောက်တဲ့ ရင်စိုင်တွေကို ဆုပ်နယ်နေသည် ။ ပူစီ့ခါးမှာ ပုဆိုး မရှိတော့ဘူး ။ မာကျောရှည်လျားတဲ့ လိင်ချောင်းကြီးက ရီရီထုန့် ဘိုက်သားချပ်ချပ်လေးကို လာထိကပ်နေသည် ။ ပူနွေးနွေး လိင်ချောင်းရဲ့ အထိအတွေ့က ရီရီထုန့်ကို ခြောက်ခြားစေသည် ။ ယောက်ျားနဲ့ တခါမှ မကြုံဖူးသေးတဲ့ အပျိုစစ်စစ်လေးမို့ သည်လို လိင်တန်ကြီးနဲ့ ထိတွေ့နေရတာနဲ့တင် ပေါင် ကြားက ရွှေကြုတ်က တဖျန်းဖျန်းနဲ့ အရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေရပြီလေ ။ ပူစီက မြုပ်နေဆဲ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို စို့ပေးသည် ။ တင်းမာနေကြတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ ခေါင်းထောင်ထလာကြသည် ။ ပူစီ့နှုတ်ခမ်းတွေက နို့သီးလေးတွေကို ညှပ်ဆွဲယူနေသည် ။ ရီရီထုန်သည် အတွေ့အထိတွေကြောင့် တအင်းအင်း ညည်းရင်း ပူစီ့ကို တွန်းပစ်နေတဲ့ လက်တွေက ပူစီ့ကိ ဖက်တွယ်နေကြပြီ ။ ပူစီရဲ့ လက်တဖက်က ရီရီထုန်ရဲ့ ရွှေကြုတ်ကို အပီအပြင် ပွတ်နေသည် ။ အရည်တွေ ရွှဲရွှဲစိုနေတာကြောင့် ပူစီ ရဲ့ လက်ညှိုး အထဲကို ထိုးသွင်းလို့ ရသွားသည် ။ ပူစီက လက်ညှိုးကို အသွင်းအထုတ်တွေ လုပ်လိုက် အထဲမှာမွှေနှောက်လိုက်နဲ့ လုပ်သည် ။ “ ပူစီ..ငါ့ကို မနေတတ်အောင် လုပ်နေတာလားဟာ….ဟင်းအင်း…..” ရီရီထုန်လည်း ပူစီရဲ့ ကလိချက်တွေကြောင့် ရွှေကြုတ်ထဲက တအား ယားတက်လာသည် ။ ခံချင်စိတ်တွေ အရမ်း ဖြစ်လာသည် ။ သူတို့အိမ်မှာ ထမင်းချက်ဖို့ လာကူခဲ့တဲ့ မရွှေက ရည်းစားနဲ့ ဖြစ်တာတွေကို ရီရီထုန်ကိုပြောပြခဲ့ဖူးလို့ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ ကာမစပ်ယှက်တာကို ကြားဖူးခဲ့သည် ။ မရွှေလည်း ဘိုက်ကြီးပြီး သူတို့အိမ်မှာ ဆက်မလုပ်တော့ ။
အဲဒီအချိန်ထဲက ရီရီထုန်သည် လိုးခြင်းကို စိတ်ဝင်စားနေခဲ့သည် ။ အခုတော့ ပူစီနဲ့ လက်တွေ့ လုပ်ဖြစ်တော့မည် ။ ပူစီက သူ့လိင်တန်ချောင်းကို အရင်းက ဆုပ်ကိုင်ပြီး ရီရီထုန့် ရွှေကြုတ်အကွဲကြောင်း အတိုင်း အပေါ်အောက် စုန်ချီဆန်ချီ ပွတ်တိုက်သည် ။ သည် အချောင်းကြီးသည် ရီရီထုန်ရဲ့ ရသာဖူး စောက်စိလေးကို အတင်းကြီး ပွတ်သွားတာ အကြိမ်ကြိမ် ဆိုတော့ ရီရီထုန်မှာ အို…အို….အို…လို့ အော်ရင်း ပေါင်တန်နှစ်ဖက်ကို ဖြဲကားပေးပြီး ပူစီ့အလိုးကို ငံ့လင့်စောင့်စားနေရပြီ ။ ပူစီလည်း အချိန်ဆွဲမနေတော့ ။ ရီရီထုန် တအား ထန်နေပြီ ဆိုတာကို သဘောပေါက်သည် ။ လိင်တန်ချောင်းကို ရွှေကြုတ်ပေါက်ထဲ တေ့ပြီး ဖိသွင်းထည့်လိုက်သည် ။ ရီရီထုန်လည်း အမေ့လို့ အော်ရင်း ပူစီ့ကို တအားဖက်လိုက်သည် ။ ရွှေကြုတ်ထဲကို တုတ်ခိုင်ဖြိုးတဲ့ ပူစီရဲ့ လီးငပဲကြီး တစ်လစ်ကြီး ၀င်နေပြီ ။ ပူစီက အသွင်းအထုတ်တွေ ဆက်တိုက် လုပ်ပေးသည် ။ ဒစ်လုံးကြီး ပတ်ကနဲပတ်ကနဲ အသံနဲ့ အထဲကို တထစ်ထစ်နဲ့ ၀င်သည် ။ “ အို…..အား….အား……အား…..အင်း..အင်း….” ရီရီထုန်တယောက် လီးဆိုတဲ့ အရသာကို လက်တွေ့ သိနေရပြီ ။ ပူစီကတော့ ဖိဖိသွင်းရင်း နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုပ်နယ်လိုက် စို့လိုက်နဲ့ …။ ဖုန်းမြည်သံကြောင့် ပူစီသည် အတိတ်က ဇာတ်လမ်းတွေကို ပြန်လည် မြင်ယောင် စဉ်းစားနေရာက ဖျတ်ကနဲ သတိဝင်လာသည် ။ ဖုန်းခေါ်တာက မော်မော်လတ်…( သို့မဟုတ် ) ကိုလတ်……ပြီး ။